Toda la serie Silent Hill para PC - Taringa!
Toda la serie Silent Hill para PC
para los fanas de este juego ADICTIVO aca van las 4 sagas
saludos i sorry qe no los encontre x otro lado qe no sea rapidshit i muchos link :S
Silent Hill (es la version de Play)
4X Cd-Rom or 2X DVD-ROM drive (4x Cd-Rom ?? prum DVD?? )
Windows 98/2000/XP, Procesador a 1GHz, 256MB de RAM, 32MB de tarjeta de vídeo y DVD.
Fuentes de Información - Toda la serie Silent Hill para PC
- Toda la serie Silent Hill para PC Dmatias
Hace más de 7 años 0 Muy groso! Muchas gracias, en estos dias bajando... No puntos porqe soy novato ¬¬ lostsk8
Hace más de 7 años 0 seran rips o completos??? blinkeroxD
Hace más de 7 años 0 lostsk8 dijo:seran rips o completos???
son full lostsk8
Hace más de 7 años 0 ja ya habia empezado a bajar!!pero la 2da parte del cd3 de silent hill 2 no funca =( joder despues de haberme bajao todo lo demas =( si puedes arreglala ke me han dicho q es el juego mas frito y dañado psicologicamente de toda la humanidad y quiero Ver a que se debe tanto alboroto!! gracias!!! blinkeroxD
Hace más de 7 años 0 lostsk8 dijo:ja ya habia empezado a bajar!!pero la 2da parte del cd3 de silent hill 2 no funca =( joder despues de haberme bajao todo lo demas =( si puedes arreglala ke me han dicho q es el juego mas frito y dañado psicologicamente de toda la humanidad y quiero Ver a que se debe tanto alboroto!! gracias!!! proba cn estos links
Silent Hill 2 CD3 part1 (95,7 MB)
Silent Hill 2 CD3 part2 (95,7 MB)
Silent Hill 2 CD3 part3 (94,9 MB)
Hace más de 7 años 0 disculpa el primero es para el emulador de play uno?? blinkeroxD
Hace más de 7 años 0 xrazielx sii es para play 1, saludos axelandr0
Hace más de 7 años 0 *W* genial por fin podre jugar el sh 3 q nunca pude jugar por q se m desocmpuso el ps2 &gt;_&gt; pero en fin genial aporte t dejaria puntos si no fuera novato feche2438
Hace más de 6 años 0 A ver si entiendo... El SH1 que posteaste es para la play 1? O para juegarlo en la compu emuladamente...??? cochodios
Hace más de 6 años 0 hay una version de SH 1 q es para pc realizada por un grupo llamado silent scope, fijate Maty_07_og
Hace más de 5 años 0 :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F :F Opciones de privacidad
Podría haber helicópteros y motos en GTA: Vice City juegos
Command and Conquer: Red Alert 2. El mejor RTS que hay. juegos
Los Mejores Memes De Majora's Mask: Riete un rato Anuncie en Taringa!|